Wikström: Nidaamka Dublin ma shaqeynayo waa in la badalaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 5 februari 2015 kl 11.04
"Dublin maanta ma ahan mid shaqeynaya"
Cecilia Wikström (FP). Foto: EU-parlamentet.
Nidaamkan Dublin ee ah in qofka qaxootiga ah waddanka uu ka soo galo EU arrintiisa magangeliyo doon lagu tijaabiyo ma ahan mid shaqeynaya, sidaas waxaa qabaa siyaasiin culus oo ka tirsan baarlamaanka EU.
Qofka qaxootiga ah waddanka ugu ee EU ka soo gaaro lagama diiwan geliyo, farahana lagama qaado. Tusaale qaxootiga inta badan ee soo gaara dalka Talyaaniga ayaa loo oglaadaa in ay socdaalka sii wataan oo waqooyiga Yurub sida Jarmalka iyo Sweden u sii gudbaan.
Cecilia Wikström (FP), oo ah xildhibaanad Sweden laga doortay kuna jirta baarlamaanka EU ayaa aaminsan in nidaamkan gebi ahaantiisaba burburay loona baahan yahay in dowladdaha Yurub dib u eegis ku sameeyan guud ahaantiisba.
– Waxaan fiican runta in la sheego, nidaamka Dublin maanta ma ahan mid shaqeynaya, ayey tiri.
Hanaanka Dublin waxaa la hirgeliyey sannadkii 2003. Waxaa loogu talagalay in qofka magangeliyo doonka ah baahidiisa lagu tijaabiyo waddanka ugu horeeya EU ee uu cagta soo dhigo, si uusan ruuxa waddamo badan iskaga dhiibin. Laakiin nidaamkan ayaan aheyn mid shaqeynaya, sababtoo ah baa la leeyahay waddamada ugu horeeye Yurub ee qaxootiga soo cagdhigaan ayaa ka cag jiida in ay faraha ka qaadan qaxootiga oo diiwaan geliyaan. Waddmadas ayaa badanaa ah waddadama ku hareereysan badweynta Mediterranean-ka.
Mid ka mid ah dadyowga qaxootiga ah ee soo maray dalka Talyaaniga balse aan wax faro ah laga qaadin waa Hisham oo ka yimid Suuriya.
– Waxaan u sheegay booliska talyaaniga in dooneynin in faro layga qaado, waayo waxaan u gudbayaa ayaan ku iri dalka Sweden, ayagana waxay yiraahdeen ok, ayuu yeri.
Waxuu ka mid yahay 170 000 oo qaxooti oo sannadkii hore doonyo ku soo maray badweynta Mediterranean-ka ayna soo badbaadiyeen ciidmada illaada badaha ee dalka Talyaaniga. Inta qaxootigan ayaa ka dib markii la soo badbaadiyey doortay in ay socdaalkooda sii wataan oo u soo gudbaan waqooyiga Yurub, sida Jarmalka iyo Sweden. Waddamadan ayaa maanta ah waddamada ugu badan ee qaabila qaxootiyada soo gaara Yurub.
Madaama hashim iyo kuwa la midka ah aan wax faro ah laga qaadin markii ay soo galeen dalka Tayaaniga ayeysan jirin si lagu cadeyn karo in ay soo mareen Talyaaniga
Sidaas in ay tahay waa in cadeyn loo hayaa, ayuu yeri Martin Lindén oo ah madax sare oo ka tirsan laanta socdaalka Migrationsverket.
– Tirada ugu badan waxay ka soo gashaa koonfurta Yurub. Haddii aan la diiwan gelin markas way adag tahay in aan niraahdo waddanka ayaa ka masuul ah ayuu yeri.
Waxaan sii badanaya tirada magangeliyo doonka ah ee ku sugan gudaha EU farahoodana ka diiwaan gashanayn nidaamka diiwangelinta ee Yurub isticmaasho ee la yiraahdo EUrodac. Sannadkii 2013kii tiro ku dhow 50 000 oo magangeliyo doon ayaa soo gaartay Sweden, 11 000 oo ka mid ah tiradas ayaa kiiskooda magangeliyo doon ahaa Dublin. Balse sannadkii ku xigay ee 2014kii yaa tirada magangeliyo doon ee Sweden soo gaartay noqotay 80 000 halka tirada kiiskooda Nidamka Dublin qabnayo waxba iska badelin.
– Tan waxay marqaati u tahay in nidaamka Dublin aheyn mid shaqeynaya, lana gaaray xilligii laga hadli lahaa si loo helo xal kale oo lagu badalo, ayey tiri Cecilia Wikström oo ah Xildhabaanad ka mid ah baarlamaanka EU una matasha xisbiga Folkpartiet ee Dalkan Sweden.